Maxaa ku dhaliyay Salaad Cali Jeelle inuu xisbi samaysto? - BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal
Maxaa ku dhaliyay Salaad Cali Jeelle inuu xisbi samaysto?
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 3 Janaayo, 2014, 07:19 GMT 10:19 SGA
Salaad Cali Jeelle oo horey wasiir kuxigeen ka soo noqday dowladdii Cabdullahi Yusuf, lana tartamay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud doorashadii madaxtinimo ee ugu dambaysay ayaa sheegay inuu samaystay xisbi siyaasadeed.
Magaalada Muqdisho ayaa looga dhawaaqay xisbi siyaasadeed oo loogu magac daray Xisbiga Midnimada iyo Dimuquraadiyadda.
Xisbigan ayaa noqonaya xisbiga afaarad ee laga aasaaso Soomaaliya oo ay colaad sokeeye ka jirtay muddo ka badan labaatan sano.
Waxaa madax ka ah Salaad Cali Jeele, oo dowladdii madaxweyne Cabdullahi Yussuf Axmed wasiir kuxigeen ka soo noqday, una tartamay jagada madaxweynenimada sanadkii 2012-ka.
Weriyaha BBC-da Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa Salaad Cali Jeele wareystay oo weydiiyay ujeedada laga leeyahay xisbigan
Somaliland: Gosashada Xaabsade saamayn ma leh04:54